MakeOwn.App - Mobile App Builder yeIOS uye Android
Shandura & Tora App Yemahara!
Gadzira Yako Yega Nhare Mapurogiramu e
iOS uye Android pasina chero kunetseka!
MakeOwn.App ndeye yekutanga DIY nhare mbozha yekuvaka. Inotsigirwa naBuildFire uye inoitirwa pamaseva eAWS.
Yedu yekuvaka chikuva chikuva inobatsira mabhizinesi uye vanamuzvinabhizinesi pasi rese kuvaka
uye shambadza zvinobudirira maapplication, pasina kunyora tambo imwe chete yekodhi.
Kutanga 30-Day Trial
Hapana Kiredhiti Kadhi Inodikanwa
MakeOwn.App ndiyo inokurumidza uye yakapusa nzira yekugadzira nyanzvi nharembozha.
Dhonza-uye-Kudonhedza Anovaka App
Ingo dhonza-uye-udonhedze nzira yako kuburikidza nekuvaka iyo app kubva pakutanga, kana gadzirisa imwe yematemplate.
Simba uye Flexible Platform
Yedu yekuvaka chikuva chikuva chine simba uye chinoshanduka zvakakwana kuti chikure newe bhizinesi rako parinokura.
In-App Kutenga uye Shopify
Gonesa e-Commerce maficha kune yako app uye tanga kuita mari yezvako kana kungotengesa zvigadzirwa.
Nyore Shambadzira kuMisika
Kumwe-kubaya ndizvo zvese zvinotora kuti ako maapplication abudiswe kuApple's App Store uye Google Play Play Store.
Yakakwana Customizable Mapurogiramu
Yedu DIY nhare mbozha anovaka inoita kuti iwe ugadzirise zviri nyore zvese zveapuro rako pasina kunyora chero kodhi.
Wedzera kubatanidzwa uye chengetedzo yevateereri vako, nekutumira smart push yekuzivisa meseji.
Dzidza Zvakawanda Nezvedu Platform
Nyore wedzera kushanda kwakasimba kune yako app nema plugins.
Yedu Feature Musika unosanganisira akasiyana siyana mashandiro ayo anovhara ruzhinji rwechero zvipi zvinodiwa neapp.
Kune yakanyanya tsika kana yakasarudzika maficha, iwe unogona kugadzira yako wega plugin, kana kuti isu isu tigadzire iyo iwe iwe.
Iyo Yese-In-Imwe Mhinduro Kuvaka AnApp
Njodzi-Yemahara uye Kugutsikana Kunovimbiswa
Vaka panguva imwe chete kune ese maDhijitari
Chinja Yako Webhusaiti uye Blogs kune Mapurogiramu
Dudziro Yako App mune Chero Mutauro
Unganidza neGoogle neFacebook Ads
Mahara Akagara-Akavakwa Matemplate uye Stock Mifananidzo
Yedu App Technology Partner ndeyeKuvakaFire
Isu Tinobata Mapurogiramu paSeva yeAmazon
Simudzira App yako neZapier uye Chikamu
Mobile App Mienzaniso
Tarisa uone mamwe maapplication akagadzirwa neyedu nharembozha yekuvaka.
Dhawunirodha Mapurogiramu Edu
Mutengo uye Zvirongwa
Isu tinopa zvirongwa zveese-saizi mabhizinesi uye mapurojekiti.
Unogona kuyedza sevhisi yedu kwemazuva makumi matatu mahara, hapana kiredhiti kadhi inodikanwa uye kana iwe ukafunga kunyorera kune chimwe chezvirongwa zvedu,
iwe zvakare uchave neye 30-zuva mari-yekudzoka garandi.
Gore negore 50% Off
Zvese zvaunoda kuti utange kuvaka yako yega app.
Sevha: $ 324
Android uye iOS Zvishandiso
Nhare mbozha uye Mahwendefa
Yemahara App Submission
Simudza programu yako nesimba rakawanda uye maficha.
Sevha: $ 684
Simudza bhizinesi rako reapp riine mikana yakawanda.
Sevha: $ 2124
Mutero Hauna Kubatanidzwa.
Uri Hugari hweMhuka,
kana Pet Kununura Boka?
Ngatitsigirei basa renyu! Ingadai iri rukudzo rwedu rukuru
kubatsira vanoda mhuka kuvaka maapps emahara zvachose.
Taura nesu kudzidza zvakawanda.
Iwe uri Agency kana Reseller,
kana kungova nemaapplication akawanda?
Nyorera kuchirongwa chedu chekudyidzana neReseller uye uwane mari dzepamoyo dzese dzatinopihwa.
kushanya Vatengesi kudzidza zvakawanda.
Une mubvunzo here? Tsvaga mhinduro mune Knowledge Base kana kushanyira Help Center.
Tora yazvino nharembozha yekukura kwemaitiro, maitiro uye kugadzirisa.
Chii Chigadzirwa Peji Optimization?
Apple's Product Peji Optimization (PPO) ndechimwe chezvinhu zvichangoburwa zvinonakidza zvevagadziri veapp uye vatengesi. Nemamiriyoni emapurogiramu anowanikwa paApp Store, zviri kuramba zvichiwedzera kuoma kuti zvionekwe. Ndokusaka kushandisa chigadzirwa peji optimization kwaizokupa muganho pamusoro pemakwikwi ako. Chii chinonzi chigadzirwa peji optimization? […]
Inopera Mobile Mitambo Mafambiro uye Maitiro ekuatsiva
Hunhu hwemitambo yenharembozha huri kuramba huchishanduka gore rega rega, uye Facebook ichangoburwa paMeta ingangove ine chekuita neramangwana remitambo iyi. Facebook yakaita basa guru mukubatsira mitambo yenharembozha kuti iwane mukurumbira pakutanga, uye zviono zvekusimbisa kutsva pa3D uye chaiko […]
Dai 25, 2022
11 Nzira dzeKugadzira Mavhidhiyo Emubairo Zvemu-App Mari Inofadza Kune Vashandisi
Kana iwe uchitsvaga nzira dzekuchengeta vashandisi vakabatikana neapp yako uye nekuwedzera kuchengetedza, mibairo yemavhidhiyo ads inzira huru yekuita kudaro. Mavhidhiyo emubairo anoita kuti vashandisi vagamuchire mimwe mibairo ye-in-app nekuona vhidhiyo pfupi yekushambadzira kwenguva yakatarwa. Zvichienderana nemubairo uye marudzi e […]
Hidza Nyanzvi YEMAHARA
Tarisa uone mamwe emhando dzedu dzepasi rose:
Isu tinoshandisa makuki pane yedu webhusaiti kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Gamuchira Zvese", unobvumidza kushandiswa kweZVESE makuki.
Cookie SettingsGamuchira Zvese